Ny vondrona WOL dia mahazo «chiffet» lafo vidy 2 any Val d'Isère
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ny vondrona WOL dia mahazo «chiffet» lafo vidy 2 any Val d'Isère
Tamin'ny 18 Jona 2020, Solexia Hôtellerie, tamin'ny alàlan'ny fandraisam-bahiny fandraisam-bahiny sy serivisy fandraisam-bahiny vaovao WOL, dia nahazo kalesy roa avo lenta tao Lohasahan'i Isere: ny Voahangy Mainty & ny Voahangy fotsy.
Ny BLACK PEARL & the WHITE PEARL dia notorontoronina sy novolavolain'i Philippe Capezzone, tompon'ny K2 Palace ao Courchevel 1850. Ny vondrona mpikarakara trano fandraisam-bahiny sy hotely fandraisam-bahiny, WOL, fizarana iray an'ny Solexia Hôtellerie, dia nividy chaleta 2 tamin'ny volana Jona 2020 ary hitandrina ny fenitra avo lenta sy avo lenta momba ny serivisy sy ny fampitaovana.
Isaky ny kaleta tsirairay, ny vato Alpina dia mifanaraka amin'ny marbra, hazo voajanahary ary keramika ho an'ny fahamendrehana izay miara-miasa amin'ny fahamboniana. Efitra fatoriana dimy, samy manana ny trano fidiany manokana, efitrano malalaka, dobo filomanosana anaty trano, sinema an-trano ary efitrano fanaovana ski lehibe iray no alefa manerana ny rihana efatra.
Ny BLACK PEARL dia manolotra ambio voadio amin'ny cocooning tanteraka amin'ny feo kanto antrasite sy mainty.
Ny PEARL WHITE, miaraka amin'ny haingony ivoara sy volafotsy, dia manaparitaka endrika malefaka sy milamina.
Ekipa natokana iray, ao anatin'izany ny mpitantana teknika sy fikolokoloana ary mpitantana chalet, dia eo am-pelatananao handray, serivisy fanadiovana, sakafo maraina, bus fitaterana sy serivisy mpiambina.
Niorina teo am-pototry ny glacier namahana ny reniranon'i Isère, ary narovan'ny lohasaha Daille, dia nisokatra tamina panorama voajanahary goavambe ny trano fisakafoanana. Ny tendrombohitra misy azy, ny Solaise ary ny Face de Bellevarde, dia nalaza noho ny fanararaotan'ireo tompon-daka ara-panatanjahantena lehibe indrindra. Eto dia ny ski ambony indrindra no manjaka, miaraka amin'ny faritra ski izay misy 300 km ny tehezan-tendrombohitra eo anelanelan'ny 1,850 m sy ny haavon'ny 3,000 m. Ny fon'ny vohitra dia mampiseho ny hatsaran-tarehy Savoyard tena izy, miaraka amin'ny arabe mihorona, trano vita vato, tafo vato mahazatra, ary trano fiangonan'ny fiangonana taloha manome azy toetra miavaka.
The TOA TANORA MAIMAIM-POANA mipetraha amin'ny tsiambaratelo tanteraka eo am-baravaran'ny resort.
Fanofanana momba ny mpiasa COVID-19 any Afrika Atsinanana
Ny tsy fitoviana amin'ny famaritana manerantany momba ny quarantine sy ny fanokanan-tena dia manakorontana ireo mpandeha